Izicelo ezinhle kakhulu zokubhala kwi-Mac yakho | Ngivela kwa-mac
Izicelo ezinhle kakhulu zokubhala kwi-Mac yakho
Omunye wemisebenzi abasebenzisi beMac abenza kakhulu ukubhala. Kungaba amanothi namaphepha ezifundo zethu, imibiko yomsebenzi wethu, okuthunyelwe kwebhulogi yethu noma amakhasi lapho sishicilela khona izindatshana njalo noma leyo ncwadi abaningi abaphupha ngayo ukufinyelela esigabeni se "super sales." Kepha noma yini esikubhalayo, siyakubhala, futhi sibhala okuningi. Ngalesi sizathu namhlanje ngizokukhombisa Ukukhethwa kokungaba izinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu ongazibhala ku-Mac yakho. Futhi ngithi "kungenzeka" ngoba, phela, uhlelo lokusebenza oluhamba phambili alusilona olunye ngaphandle kwalolo olukwazi kangcono ukuzivumelanisa nezidingo zomsebenzisi ngamunye, hhayi lona engiluthanda kakhulu.
Kepha futhi, kusukela ekucabangeni ukuthi iningi labasebenzisi beMac nabo bangabasebenzisi be-iPad kanye / noma be-iPhone, sizofaka kuphela lezo zinhlelo zokusebenza zokubhala ezinezinhlobo zazo ze-iOS Ngoba isici esivamile sababhali abaningi ukuthi noma kunini, noma yikuphi lapho kuhle khona lapho isibani sobuciko sivuliwe. Ngakho ake siqale.
Akukona ukuthi «imbuzi idonsela intaba», kumane nje ukuthi uma sikhuluma ngezicelo zokubhala kwi-Mac, into esobala kakhulu ibonakala iqala ngalokho i-Apple uqobo esinikela ngakho mahhala, amakhasi.
Ngeke ngingene emininingwaneni eminingi ngohlelo ngalunye, noma besingeke siqede, kepha ngokwami ​​sengivele ngikutshela ukuthi Amakhasi akuyona intandokazi yami. Ukuze uvune wena kubalulekile ukukhomba ifayela lakho le- ukuhlanganiswa okukhulu nokuvumelanisa namanye amadivayisi nge-iCloud (ungaqala ukubhala ku-Mac yakho, uqhubeke ku-iPhone yakho ngenkathi ulinde ibhasi, bese uqedela kusuka ku-iPad yakho unekhofi), futhi lokho kune isikhombikubona esilula kakhulu futhi esisebenziseka kalula, ilungele abafikayo nokuthi ngasikhathi sinye, inikeza ithani lezici ezibanzi zabasebenzisi abaphambili. Futhi akumelwe sikhohlwe ukuthi ungangenisa futhi uthumele womabili ngefomethi yamakhasi uqobo nakuZwi, i-PDF ne-ePub. Njengoba kumahhala, kungcono ukuthi uzihlole futhi uzazise wena.
Asiqhubeke nokusobala, iZwi. Musa ukungijikijela ngamatshe kodwa, mathupha, ngiyayithanda i-Word interface ngaphezu kwamakhasi, noma kunjalo, inemisebenzi eminingi phambi kwayo ukuthi kwesinye isikhathi udinga imizuzwana embalwa ukwazi ukuthi ungathinta kuphi. Ivumelanisa kahle kakhulu phakathi kwamadivayisi nge-akhawunti yakho ye-Microsoft futhi, asikwazi ukuyiphika, iphelele kakhulu futhi isetshenziswa kakhulu emhlabeni jikelele.
Umlobi we-iA ugqame nge isikhombimsebenzisi esibonakalayo esincane kakhulu yakhelwe ukunika umuzwa wesitayela sokubhala. Uma ubhala akukho lutho esibukweni, ngaphandle kweshidi namazwi akho.
Umbhalo ongenalutho namafayela agcinwe ngokuzenzakalela ku-iCloud nezinye izici zawo, kanye ne- Ukusekelwa kweMarkdown. Kepha izici nezinzuzo ze-IA Writer ziningi kakhulu, ikakhulukazi uma ungomunye walabo abaphazamiseka kalula.
Scrivener isicelo sokubhala kwi-Mac oyintandokazi yababhali abaningi. Izinzuzo zayo eziyinhloko zifaka ukubhala ngaphandle kweziphazamiso kumodi ye-IA Writer, izinga eliphakeme lokwenza ngokwezifiso (ingemuva nombala ongaphambili, amamajini, uhlobo lokuskrola ...) ukukhululeka okuhle kokuhlela iphrojekthi ebalulekile yokubhala efana nenoveli ngenxa ye- "corkboard" yayo "buka nezinye izici eziningi nemisebenzi eye yakwenza kwaba enye yezinhlelo zokusebenza zokubhala ezihlonishwa kakhulu.
Futhi ngishiya intandokazi yami ekugcineni, Ulysses, uhlelo lokusebenza luhle ngendlela emangalisayo njengoba lusebenza, kokubili kwi-Mac ne-iPad noma i-iPhone, futhi futhi enye ebiza kakhulu (€ 44,99 ye-Mac ne- € 24,99 ye-iPhone / iPad).
Ngokunambitha kwami, i-Ulysses wuhlelo lokusebenza oluphelele lwalabo ababhala njalo kuwebhu, kepha nalabo abenza amaphrojekthi wokufuna ukuvelela njengokubhala incwadi.
Su I-interface ilula ngokwedlulele futhi ngaphandle kweziphazamiso, ekuvumela ukuthi ugxile ekubhaleni, hhayi okunye. Yonke imibhalo yakho ivumelaniswe nge-iCloud, ngaphandle kwezinkinga, iyahambisana neMarkdown futhi ungathumela ngeZwi, i-PDF, ifomethi ye-epub noma ushicilele ngqo kubhulogi lakho le-WordPress noma i-Medium.
Vele kunezinye izinhlelo zokusebenza eziningi ongazibhala kwi-Mac yakho, lokhu kuyisampula nje kepha, iyiphi oyithandayo futhi ngani?
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Izicelo ezinhle kakhulu zokubhala kwi-Mac yakho
Angivumelani, awusho i-LibreOffice ngoba ayikhokhiwe? Hamba manje !!!
Kulula ukwedlula ukucabanga kwakho okuyiphutha kukaRotelo: Angikhulumi ngeLibreOffice ngoba angikaze ngiyisebenzise ngakho-ke angizukuncoma okuthile engingakakuvuli nokukuvula, bekungeke kube nokwethembeka kimi. Noma ngabe kumahhala noma kuyakhokhelwa akuyona into enquma ikhwalithi yomkhiqizo ngakho-ke, akuyona ingxenye engiyoze ngibuswe ngayo. Ngikufisela okuhle!
Yimaphi amakhasi akhululekile kuphi?, Ngiwathola esitolo ngezindleko ze- € 19,99 ...
Sawubona. Sekuyiminyaka eminingana amakhasi, Izinombolo kanye ne-Keynote bekhululekile uma uthenga noma iyiphi idivayisi ye-Apple, lokhu kumenyezelwe ku-Keynote, futhi ngikusho lokhu ngokuhlangenwe nakho kwami. Mhlawumbe awukathengi noma iyiphi imikhiqizo ye-Apple ezikhathini zakamuva kepha uma wenza kanjalo, qiniseka ukungena ngemvume ngaleyo ID ye-Apple futhi bazovela balande mahhala njengabanye abasebenzisi.
Kuhle kakhulu Uma imibandela yalolu hlu lwezicelo ukuthi uyisebenzisile ngingacabanga ukushintsha isihloko salokhu okuthunyelwe kwebhulogi. Ngiyavuma ngokuphelele ukuthi intengo ayikhombisi ikhwalithi yomkhiqizo, kodwa futhi kuyiqiniso ukuthi ukuhlola abakhethiweyo abangu-5 akukuvumeli ukuthi ukhulume kahle ngekhwalithi yezicelo zohlelo lokusebenza lwe- "write in macOS".
Sawubona i-ViVVo. Ubani othe ngizame kuphela "abahlanu"? Engikushilo ukuthi angizamile i-LibreOffice futhi ngenxa yalokho, angiyifaki futhi angikhulumeli noma ngiyaphikisana nayo. Sekwenziwe. Kunezinhlelo eziningi zokubhala ku-Mac futhi-ke angizizamanga zonke, hhayi mina, hhayi wena, hhayi noma ngubani. Ekuqaleni kombhalo ngenza inhloso yami icace impela, yize kubonakala sengathi awunaki ngaphezu kwesihloko. Ngithi: «namuhla ngizokukhombisa okungahle kube izicelo ezingcono kakhulu ongazibhala kwi-Mac yakho. Futhi ngithi" kungenzeka "ngoba, phela, uhlelo lokusebenza oluhamba phambili alulona olunye ngaphandle kwalolo olukwazi ukusebenza kahle kakhulu yokuzivumelanisa nezidingo zomsebenzisi ngamunye ikakhulukazi, hhayi engiyithanda kakhulu. ».
Ngicabanga ukuthi ngaphambi kokuphawula, futhi ngaphezu kwakho konke, ngaphambi kokugxeka ngendlela engemihle, kubalulekile ukuthi uwufunde ngokucophelela wonke umbhalo. Uma kungenzeka, ngizokuphinda ngokuzicaphuna futhi: "uhlelo lokusebenza oluhamba phambili alusilona olunye ngaphandle kwalolo olukwazi kangcono ukuzivumelanisa nezidingo zomsebenzisi ngamunye, hhayi lona engiluthanda kakhulu."
Futhi, ngiyabingelela futhi ngiyabonga kakhulu ngokusivakashela.
Cecilia Camppos kusho
Ngibhala incwadi kwi-Mac futhi ngidinga uhlelo lokumaka amakhasi kimi bese nginquma amakhasi angaphambili nawangemuva, njll. Futhi lokho kufaka nokuthi kungenzeka kufaka izithombe.
Kwenze kube lula ukuyiphatha, ngoba angiqondi okuningi kwalezi zinto.
Ngiyabonga kakhulu ngokungeseka.
Phendula uCecilia Camppos
Abesilisa bakaFernando Arriola kusho
Ngithenge ilayisense leScrivener leMac cishe eminyakeni emibili edlule. Namuhla lapho ngike ngazama ukuyivula ukubhala okuthile, kuvela ukuthi umsizi weMac ungitshela ukuthi ngeke akwazi ukuyivula ngoba umhlinzeki akayivuselelanga inguqulo, eyayenzelwe ukusebenza ngama-bits angama-32 naku-Mac IOS, iyayidinga sebenza ngama-bits angama-64; Ngiye kusayithi lomhlinzeki ngacela inombolo yelayisense. I-Appstore ikhombisa ukuthi njengoba ingumhlinzeki ozimele, ayinasibopho.
Phendula uFernando Arriola Meneses
Uhlelo lokusebenza oluhle lokuqamba kabusha amafayela ngobuningi lubizwa ngokuthi yi-Better Rename 10
Le yi-Apple Park kuvidiyo yakamuva etholakalayo